ပြည်သူတွေအတွက်ရပ်တည်ပေးနေတဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည် ကိုအထင်လွဲနေကြလို့ ဘာတွေထပ်လုပ်ပြစေချင်တာလည်းလို့ မေးလာတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဆန္ဒပြဟေ့ ပြကြဆိုတော့လည်း တရားစခန်းကထွက်ထွက်ချင်း လမ်းပေါ်တူတူထွက်ခဲ့တယ်။သံပုံတီး တီးဆိုတော့လည်း တူတူတီးတာပဲ နိုင်ငံတကာသိအောင်အတွက်ဆိုလို ig , twitter နဲ့ youtube channel တွေမှာ speak out လုပ်ပေးတယ် [ ဝမ်းသာစရာအနေနဲ့ ထိုင်း ၊ ထိုင်ဝမ် နဲ့ ကိုရီးယား မီဒီယာတွေမှာ ပါလာခဲ့တယ်] မှတ်မိအုံးမှာပါ ရပ်ကွက်အလိုက်ကင်းစောင့်ရတော့ညအဆာပြေစားဖို့ ကိုယ်တိုင်မုန့်အစုံလုပ်ပြီး ပို့ပေးခဲ့တာ တက်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ပါဆိုလို့ လှူတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါခဲ့တယ် (ခုလည်း ပါဝင်နေဆဲ) social ပေါ်တက် ဘယ်မှာလှူတာ မပြောပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ (၂၈) နောက် အပစ်ခံရသူတွေများပြီးတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေကို စာရင်းပြုပြီးလှူခဲ့ပေးတယ်..။
တခြား CDM.ers တွေအတွက်လည်း ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ် Strike တိုင်းမှာ တက်နိုင်တဲ့ဆီမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ သူမလုပ်ခဲ့တာတွေကနည်းနိုင်လောက်တယ် ဆိုပေမဲ့ အားရစရာသိပ်မကောင်းပေမဲ့ သူနိုင်သလောက်ပါဝင်ပေးခဲ့တာပဲ။ အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ပေးခဲ့တာပဲ။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ Page ရဲ့ account တစ်ခုက hack ခံလိုက်ရပါရော ၊ အရင် personal တွေနဲ့ ဒီဟာနဲ့ပေါင်းပြီး စကစ အားပေးနေသူလိုလို ၊ အယောင်ပြသမားလိုလိုနာမည်ဖျက်ခံရတော့တာပဲ။ ဘယ်သူကဘယ်လောက်လုပ်နေပြီး ဒီလောက်လုပ်ပြပြီး လုံလောက်နေပြီထင်နေလားဆိုပြီး ယောယောင်ပေါချောင် ပြောကြတော့တာပဲ။ ဟန်ငြိမ်းဉီးက စဖြန့်ခဲ့တဲ့ personal ကို ဒီကာလကြီးမှာ သူ့ကြောင့်နဲ့ အာရုံမများဖို့ gp မှာပဲ အသိပေးခဲ့တယ် ၊ ဒီကိစ္စနဲ့အာရုံမများစေချင်လို့၊ဘုံရန်သူကိုဦးတည်နိုင်ဖို့အတွက်လေ..။
အဖမ်းဆီးတွေကြမ်းပြီး လူတွေအလျှိုလျှိုအရင်လောက် active မဖြစ်တော့တဲ့အချိန် ၊ အပြင်သွားလို့ဖုန်းစစ်ခံနေရတဲ့အချိန်တွေ၊ ဝရမ်းပါ မပါ ဖမ်းဆီးနေတဲ့အချိန်တွေ​ကြောင့် သူမက အခြားအနုပညာရှင်တွေနဲ့နည်းတူ ရှောင်တိမ်းနေရတယ်။ လူတွေကသိပ်ရယ်ရတယ် ဆိုတာ ” ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှ အပြင်သွားရင် မလုံခြုံလို့ Account ဖျက် ၊ ပုံတွေဖျက်ပြီးသွားနေရတဲ့အချိန် ၊ အရင်လို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မလုပ်ရတော့တဲ့အချိန်မှာမှ ဝတ်မှုံရွှေရည် မပေါ်လာတော့လို့တဲ့ ” လုပ်သင့်တဲ့အချိန်လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ခဲ့ပြီးမှ တိတ်နေသင့်တဲ့အချိန်ခဏတိတ်သွားတာအပြစ်လား ? ဒါမှမဟုတ် speak out မလုပ်နိုင်တော့တာလား [ နိုင်ငံတာသိအောင်လို့မပြောနဲ့နော်၊သိအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးသား ]
မကစ်က သေနတ်ကြီးထမ်း တောခိုပြီး ရှေ့ထွက်တိုက်မှ ကျေနပ်မှာလား ၊ေ ထာင်ထဲအထည့်ခံရပြီး ဝမ်းနည်းပါတယ် အမြန်လွတ်ပါစေ လို့ ရေးရမှ ကျေနပ်မှာလား။ မကစ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို သိပ်ပြီးအားမလိုအားမရဖြစ်ပေမဲ့၊ တို့ကစ်က ရေပေါ်ဆီအယောင်ပြလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိစေချင်ရုံ သက်သက်ရေးတာ။ boycott ချင် cott လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီးရေးကြ၊မန့်ကြတာ ကြိုက်သလိုသာလုပ်ကြသိစေချင်တာက ကစ် က အယောင်ပြမဟုတ်ဘူးဆို တာပဲ ၊ အသည်းပေါက်ဆုံးက ရေပေါ်ဆီမ လို့ခေါ်ပြီး profile lock ချထား ၊ ဟိုဖီးလ်ဒီဖီးလ်ချီးပန်းနေတဲ့ဟာတွေ​ကို ပြောပြတာ။ ဒီစာရှည်ကြီးကြောင့်သတင်း တစ်စုံတစ်ရာဖုံးခဲ့သည်ရှိသော် အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ ( စာအရှည်ကြီးမို့ဖတ်ပြတို့ ၊ voice နဲ့ဖတ်ပြတို့ လာမလုပ်နဲ့မဖတ်ချင်ကျော်သွား ) သြော် ဘုံရန်သူက မအလ တို့နော် မမေ့နဲ့ မမေ့နဲ့… လို့ရေးသားထားတာပါ။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို
ခဈြလှစှာသောပရိတျသတျကွီးရေ ဆန်ဒပွဟေ့ ပွကွဆိုတော့လညျး တရားစခနျးကထှကျထှကျခငျြး လမျးပျေါတူတူထှကျခဲ့တယျ။သံပုံတီး တီးဆိုတော့လညျး တူတူတီးတာပဲ နိုငျငံတကာသိအောငျအတှကျဆိုလို ig , twitter နဲ့ youtube channel တှမှော speak out လုပျပေးတယျ [ ဝမျးသာစရာအနနေဲ့ ထိုငျး ၊ ထိုငျဝမျ နဲ့ ကိုရီးယား မီဒီယာတှမှော ပါလာခဲ့တယျ] မှတျမိအုံးမှာပါ ရပျကှကျအလိုကျကငျးစောငျ့ရတော့ညအဆာပွစေားဖို့ ကိုယျတိုငျမုနျ့အစုံလုပျပွီး ပို့ပေးခဲ့တာ တကျနိုငျတဲ့ဘကျက ပါဝငျပါဆိုလို့ လှူတဲ့အစီအစဉျတှမှောပါခဲ့တယျ (ခုလညျး ပါဝငျနဆေဲ) social ပျေါတကျ ဘယျမှာလှူတာ မပွောပမေဲ့ဖဖေျောဝါရီ (၂၈) နောကျ အပဈခံရသူတှမြေားပွီးတကယျလိုအပျနတေဲ့ အိမျထောငျစုတှကေို စာရငျးပွုပွီးလှူခဲ့ပေးတယျ..။
တခွား CDM.ers တှအေတှကျလညျး ပံ့ပိုးမှုတှလေုပျခဲ့တယျ Strike တိုငျးမှာ တကျနိုငျတဲ့ဆီမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ သူမလုပျခဲ့တာတှကေနညျးနိုငျလောကျတယျ ဆိုပမေဲ့ အားရစရာသိပျမကောငျးပမေဲ့ သူနိုငျသလောကျပါဝငျပေးခဲ့တာပဲ။ အာဏာရှငျကိုတျောလှနျပေးခဲ့တာပဲ။ ကံမကောငျးစှာနဲ့ Page ရဲ့ account တဈခုက hack ခံလိုကျရပါရော ၊ အရငျ personal တှနေဲ့ ဒီဟာနဲ့ပေါငျးပွီး စကစ အားပေးနသေူလိုလို ၊ အယောငျပွသမားလိုလိုနာမညျဖကျြခံရတော့တာပဲ။ ဘယျသူကဘယျလောကျလုပျနပွေီး ဒီလောကျလုပျပွပွီး လုံလောကျနပွေီထငျနလေားဆိုပွီး ယောယောငျပေါခြောငျ ပွောကွတော့တာပဲ။ ဟနျငွိမျးဉီးက စဖွနျ့ခဲ့တဲ့ personal ကို ဒီကာလကွီးမှာ သူ့ကွောငျ့နဲ့ အာရုံမမြားဖို့ gp မှာပဲ အသိပေးခဲ့တယျ ၊ ဒီကိစ်စနဲ့အာရုံမမြားစခေငျြလို့၊ဘုံရနျသူကိုဦးတညျနိုငျဖို့အတှကျလေ..။
အဖမျးဆီးတှကွေမျးပွီး လူတှအေလြှိုလြှိုအရငျလောကျ active မဖွဈတော့တဲ့အခြိနျ ၊ အပွငျသှားလို့ဖုနျးစဈခံနရေတဲ့အခြိနျတှေ၊ ဝရမျးပါ မပါ ဖမျးဆီးနတေဲ့အခြိနျတှေ​ကွောငျ့ သူမက အခွားအနုပညာရှငျတှနေဲ့နညျးတူ ရှောငျတိမျးနရေတယျ။ လူတှကေသိပျရယျရတယျ ဆိုတာ ” ကိုယျကိုယျတိုငျမှ အပွငျသှားရငျ မလုံခွုံလို့ Account ဖကျြ ၊ ပုံတှဖေကျြပွီးသှားနရေတဲ့အခြိနျ ၊ အရငျလို ကယျြကယျြလောငျလောငျ မလုပျရတော့တဲ့အခြိနျမှာမှ ဝတျမှုံရှရေညျ မပျေါလာတော့လို့တဲ့ ” လုပျသငျ့တဲ့အခြိနျလုပျနိုငျသလောကျလုပျခဲ့ပွီးမှ တိတျနသေငျ့တဲ့အခြိနျခဏတိတျသှားတာအပွဈလား ? ဒါမှမဟုတျ speak out မလုပျနိုငျတော့တာလား [ နိုငျငံတာသိအောငျလို့မပွောနဲ့နျော၊သိအောငျလုပျပေးခဲ့ပွီးသား ]
မကဈက သနေတျကွီးထမျး တောခိုပွီး ရှထှေ့ကျတိုကျမှ ကနြေပျမှာလား ၊ေ ထာငျထဲအထညျ့ခံရပွီး ဝမျးနညျးပါတယျ အမွနျလှတျပါစေ လို့ ရေးရမှ ကနြေပျမှာလား။ မကဈရဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေို သိပျပွီးအားမလိုအားမရဖွဈပမေဲ့၊ တို့ကဈက ရပေျေါဆီအယောငျပွလုပျခဲ့တာမဟုတျဘူးဆိုတာကို သိစခေငျြရုံ သကျသကျရေးတာ။ boycott ခငျြ cott လုပျခငျြသလိုလုပျပွီးရေးကွ၊မနျ့ကွတာ ကွိုကျသလိုသာလုပျကွသိစခေငျြတာက ကဈ က အယောငျပွမဟုတျဘူးဆို တာပဲ ၊ အသညျးပေါကျဆုံးက ရပေျေါဆီမ လို့ချေါပွီး profile lock ခထြား ၊ ဟိုဖီးလျဒီဖီးလျခြီးပနျးနတေဲ့ဟာတှေ​ကို ပွောပွတာ။ ဒီစာရှညျကွီးကွောငျ့သတငျး တဈစုံတဈရာဖုံးခဲ့သညျရှိသျော အနူးအညှတျတောငျးပနျပါတယျ ခငျဗြာ ( စာအရှညျကွီးမို့ဖတျပွတို့ ၊ voice နဲ့ဖတျပွတို့ လာမလုပျနဲ့မဖတျခငျြကြျောသှား ) သွျော ဘုံရနျသူက မအလ တို့နျော မမနေဲ့ မမနေဲ့… လို့ရေးသားထားတာပါ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့